विपन्नको चिन्ता- रोगले भन्दा भोकले मर्ने भइयो- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको लगत संकलन गर्दै पालिका, शारदा नगरपालिकाद्वारा खाद्यान्न वितरण
चैत्र २०, २०७६ विप्लव मर्हजन
सल्यान — बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका—५ का विपन्न दलित माघे बादीको दैनिक जीविकोपार्जनको सहारा भनेको मजदुरी हो । खेतीपाती गर्ने जग्गा नभएपछि मजदुरी गरेर नै उनले पाँच जनाको परिवार जेनतेन पाल्दै आएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण मजदुरी गर्न नपाएपछि उनलाई परिवार पाल्न समस्या भएको छ ।
स्थानीय चिने बादीको समस्या पनि फरक छैन । दैनिक मजदुरीको कमाइले गुजारा चलाउँदै आएका उनलाई बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता बढेको छ । दुई/चार दिनलाई साचेको खाद्यसामग्री सकिएपछि उनी खोले खाएर पेट भर्दै आएका छन् ।
यी दुई मात्र नभई जिल्लाभरिका अतिविपन्न वर्गमा पर्ने दलितहरु लकडाउनको मारमा परेका छन् । लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले उनीहरुलाई दुई छाक जोहो गर्न कठिनाइ हुन थालेको छ । स्थानीय तहले मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्नलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भनेपनि लगत संकलनमा ढिलाइ हुँदा उनीहरु समस्यामा पर्न थालेका हुन् ।
‘कोरोना रोगले सबै मर्छन् भन्थे । यहाँ त खाना खान नपाएर भोकले मरिएला जस्तो हुन थालिसक्यो,’स्थानीय बिसे बादीले भने,‘हेरौं कतिदिन खोले खाएर बाँच्न सकिन्छ ।’ बजारमा रासनको भाउ चुलिँदै गएकाले साचेर राखेको पैसाले पनि नपुग्ने अवस्था आएको उनले दु:खेसो पोखे ।
शारदा नगरपालिकाले मजदुरी गरिखाने विपन्नको लगत संकलन गरिसकेको र बिहीबार वडा नं. ४ बाट प्रतिव्यक्ति दुई हजार बराबरका खाद्यसामग्री वितरण गर्न थालिएको जनाएको छ । नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका कोहीलाई पनि भोकै नराख्ने र धमाधम खाद्यान्न उपलब्ध गराउने बताए ।
बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले लगत संकलनमा भएको ढिलाइले विपन्नलाई समयमै खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । उनले प्रतिघर परिवारको संख्या हेरेर दुईदेखि चार हजार रकम बराबरको खाद्यसामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी गराए ।
कालीमाटी गाउँपालिकालेलगत संकलन गर्दै आए पनि वास्तविक विपन्न छुट्याउन कठिनाइ भएकाले खाद्यसामग्री समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको सात वडामा अध्यक्ष मार्फत लगत संकलन गर्न लगाउँदा मजदुरी गरी खाने विपन्नको संख्या हजारभन्दा कम नआउने देखिएको छ । यसले गर्दा वास्तविक विपन्न तथा दैनिक मजदुरी गरिखाने को हो भन्ने छुट्याउन कठिनाइ भएको छ ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले दैनिक मजदुरी गरी खाद्यसामग्री किनेर खानेको लगत संकलन गरिसकेको र केही दिनमै खाद्यसामग्री उपलब्ध गराउने गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले बताए । ‘पालिकाभित्रका कसैले खाली पेट बस्नुपर्ने छैन,’ उनले भने । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि लगत संकलन गरिरहेको जनाएका छन् । उनीहरुले छिटै विपन्न मजदुरलाई खाद्यसामग्री उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।
शारदा नगरपालिकाका ७८ जनालाई खाद्यान्न वितरण
शारदा नगरपालिकाले वडा नं ४ साहुटोलाका मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न वर्गलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । वडा नं ४ साहुटोलामा १८ र वडा नं. २ खलंगाका ६० गरी बिहीबार मात्र ७८ विपन्न मजदुरलाई राहत वितरण गरेको हो ।
नगरपालिकाले प्रतिघर दुई हजार रुपैयाँका दरले २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल, दुई किलो नुन र साबुन उपलब्ध गराएको नगरप्रमुख सुरेश अधिकारीले बताए । उनले शुक्रबार वडा नं. १ का एक सय तीन विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने जानकारी गराए ।
उनले नगरपालिकाभित्र झन्डै पाँच सय विपन्न परिवार रहेको जानकारी गराए । ‘सरकारले लकडाउन बढाएमा त्यही अनुसार विपन्न परिवारलाई थप खाद्यान्न सहयोग गरिने छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १४:११
चैत्र २०, २०७६ बुनु थारु
काठमाडौँ — सरकारले लकडाउन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ट्रोल बने । जस्तो– हाछ्यूँ गर्दा बिरालो तर्सेर भागेको, हातको इसाराले चुरोट मागेको तर नपाउँदा छटपटी भएको, घरको इँटा गनेको आदि । यिनले केही क्षण ‘रिफ्रेस’ बनाउलान् ।
तर यति बेला तपाईंको दिमाग सधैंझैं सामान्य छ त ? पक्कै छैन । लकडाउन फेरि थपिएला कि भन्ने चिन्ता छ तपाईंलाई । कोभिड–१९ को असर कहाँसम्म पुग्ला भनेर सोच्न पनि भ्याउनुहुन्छ । घरमा ग्यास सकियो भने के गर्ने भन्ने अर्को समस्या अघिल्तिर तेर्सिहाल्छ ।
सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका धेरैको दिमागमा अनगिन्ती विचार खेलिरहेका छन् । मनोचिकित्सकहरू भन्छन्– महामारीको समयमा स्वतः मानसिक रोग केही हदसम्म बढ्छ ।
विराटनगरकी १९ वर्षीया युवतीमा लकडाउन सुरु भएदेखि अनौठो लक्षण देखा पर्न थाल्यो । उनी जथाभावी बोल्ने, रुने, हाँस्ने, आत्तिने, रातभर नसुत्ने गर्थिन् । उनी स्थानीय क्लिनिकमा गइन्, उपचार गराइन् । समस्या बीसको उन्नाइस नभएपछि उनी मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रितेश थापाको सम्पर्कमा आइन् । ‘गम्भीर मानसिक समस्या साइकोसिस नै भइसकेको रहेछ । परामर्श र औषधिले उनी ठीक हुँदै छिन्,’ डा. रितेशले कान्तिपुरसित भने ।
भक्तपुरका ४५ वर्षीय पुरुषमा आत्तिने बानी देखिन थाल्यो । उनमा विगतमा पनि मानसिक समस्या थियो । तर ठीक भएका थिए । लकडाउनले समस्या उल्टिएको थियो । उनलाई कानमा कसैले बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्‍याएजस्तै लाग्थ्यो । कसैले ‘तिम्रो शरीरमा चिप फिट छ, त्यसबाट कोरोना सर्छ’ भनेझैं लाग्थ्यो । मनोपरामर्श लिएपछि उनी अहिले सहज जीवन जिउन कोसिस गर्दै छन् । धेरै सुधार भएको छ ।
डा. रितेशका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेर दिनभरि सामाजिक सञ्जालमा कोभिड–१९ सम्बन्धी कुरा र भ्रामक समाचार पढ्दा मानिस मानसिक बिरामी बन्दै छन् । घरमै केही नगरी बस्दा कोभिड–१९ बारे सोच्ने, त्यसकै कुरा गर्ने हुनाले आत्तिने, छटपटी र तनाव हुने समस्या बढिरहेको छ ।
मनोचिकित्सकहरूका अनुसार कोभिड–१९ को डर र त्रासले नयाँ मानसिक रोगका बिरामी थपिएका त छन् नै पुराना मानसिक रोगीको व्यथा झन् बढेको छ ।
ट्रान्सकल्चरल साइकोसोसल अर्गनाइजेसन नेपालले कोभिड–१९ सम्बन्धी मनोसामाजिक परामर्श दिन हटलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ । एक सातादेखि सञ्चालन गरिएको हटलाइनमा बुधबारसम्म २७ जनाले कल गरिसकेका छन् । फोन गर्नेमा धेरै पुरुष छन् । क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट र साइकोसोसल काउन्सिलरले बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्म मानसिक समस्यासम्बन्धी परामर्श दिन्छन् । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा. कमल गौतमका अनुसार धेरै जनाले मानिसमा कोभिड–१९ कसरी सर्छ भनेर जिज्ञासा राख्छन् । ‘निद्रा नलाग्दा, आत्तिँदा, घाँटी खसखस गर्दा कोरोना हो कि भनेर फोन गर्ने पनि छन्,’ उनले भने, ‘कोरोना लागिहाल्छ कि भन्ने शंका गरेर मनमा कुरा खेलाउने र छटपटी हुने समस्या साझा रूपमा देखिएको छ ।’
चिकित्सकहरूले परामर्श दिएर औषधि प्रेस्क्राइब गरे पनि औषधि किन्न समस्या छ । ‘सरकारले स्काइप तथा टेलिमेडिसिन सेन्टरबाट कसरी परामर्श दिने, कसरी औषधि प्रेस्क्रिप्सन गर्ने भनेर गाइडलाइन बनाउनुपर्छ,’ डा. गौतमले भने ।
मनोचिकित्सक डा. कपिल उपाध्यायलाई केही दिनअघि तेह्रथुमकी एक शिक्षिकाको फोन आयो । आफ्नो ठाउँमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलियो भने के गर्ने भनेर उनी निकै तनावमा रहिछन् । ‘अहिले सहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि मानसिक समस्या देखिन थालेको छ । सहरका मान्छे कामविहीन भएर घरमै बसेका छन्, व्यायायमा पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘कामले शारीरिक स्फूर्ति राख्नुका साथै दिमाग ताजा बनाउन गाउँमा सम्भव छ ।’
विश्वभरि नै कोभिड–१९ महामारीका रूपमा फैलिइरहँदा मनमा डर हुनु मानवीय स्वभाव भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘सकारात्मक सोचले दिमाग मात्र होइन, शरीर पनि बलियो बनाउँछ,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘महामारीसँग भिड्न सक्छु भन्ने सकारात्मक विचार राख्ने गरे यस्ता समस्याबाट मुक्त भइन्छ ।’
तनावरहित कसरी हुने ?
सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय नबिताउने
कोभिड–१९ सम्बन्धी समाचार धेरै नपढ्ने, आधिकारिक मिडियाको मात्र भर पर्ने
आफूलाई व्यस्त राख्ने तथा मनमा लागेका कुरा गर्ने
परिवारसँग समय बिताउने
पोषणजन्य आहार खाने
किताब पढ्ने, लेख्ने, फिल्म हेर्ने
सामान्य व्यायाम र योग गर्ने
जाँडरक्सी र अन्य लागुपदार्थबाट टाढा रहने
महामारी बिस्तारै साम्य हुन्छ भन्ने सोच राख्ने
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १४:१०